ဝိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၁၂) | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← ၀ိပဿနာနည်းပညာအမေးအဖြေ (၁၁)
ဖြေ ။ အော် တရားထိုင်တာ နာရီနဲ့ မသတ်မှတ်ရဘူး။ ရင်ထဲ ရှင်းတာနဲ့ သတ်မှတ်ရတယ်။ ရင်ထဲရှင်းရင် ပြီးတာပဲ။ တစ်နာရီ မပြည့်လည်း ရှင်းရင်ထလို့ရတယ်။ တစ်နာရီတိတိ ထိုင်ပြီး ရင်ထဲမှာ ရှုပ်ယှက်ခတ်ပြီး လေးပင်နေရင်လည်း မကိုက်ဘူး ဒီတော့ ရင်ထဲရှင်းတာနဲ့ တိုင်းပါ – နာရီနဲ့ မတိုင်းပါနဲ့။ တော်တော်များများ နာရီနဲ့ တိုင်းတာကတော့ အများညီညီ ညွှတ်ညွှတ်နဲ့ ထိုင်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတာပေါ့။ တကယ် တစ်ယောက်ချင်း ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ ရင်ထဲ တစ်ရှင်းက အရေးကြီးတယ်။
မေး ။ ဟာ ဟုတ်ပါပြီဆရာကြီး ကျွန်တော်က သိချင်လို့ပါ။ ကြာကြာထိုင်မှ ကောင်းမယ်လို့လည်း နည်းနည်းထင်လို့ပါ။
ဖြေ ။ အချိန်ကြာခြင်း မကြာခြင်းကတော့ အဆုံးအဖြတ် မဟုတ်ပါဘူး၊ ရင်ထဲမှာ ရှင်းဖို့ မရှင်းဖို့ပါပဲ။
မေး ။ ဟုတ်ပြီ ဆရာကြီး ကျွန်တော်နောက် ရင်ထဲရှင်းအောင် ထိုင်မယ်။
ဖြေ ။ အေး ရင်ထဲကိုရှင်းအောင်ထိုင် – ရှုပ်တာ ရှင်းရမယ်၊ လေးတာ ပေါ့ရမယ်၊ ပူတာ အေးရမယ်၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်နေတာ ငြိမ်ရမယ်၊ နေလို့ မကောင်းတာ ကောင်းရမယ် — ဒါတွေဟာ တရားထိုင်ခြင်းရဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေပဲ။ ဒါကို နည်းနည်းခွဲခြား စိပ်ဖြာနိုင်ရမယ်။ သဘောပေါက်လား မြန်မာလိုပြောတာ သဘောပေါက်လား၊ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရမှာလား “You must have the ability to differentiate between before and after, Right!”
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး။ မြန်မာလိုပဲပြောပါ ကျွန်တော် မသိတဲ့စကားလုံးတွေ ကျော်သွားမှာ စိုးလို့။ အခုပြောတာတော့ သိပါတယ်။
ဖြေ ။ အေး အဲဒီလိုဆိုရင် ရင်ထဲမှာ ရှင်းအောင်ထိုင် (Clear up your heart…that is the main point, you know.)
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သဘောပေါက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် နောက်ကို ရင်ထဲမှာ ရှင်းအောင် ထိုင်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း လောကထဲ ၀င်တော့ တစ်ခါတစ်ခါကျ ပူတာတွေ လှုပ်တာတွေလည်း ရှိတယ် ဆရာကြီးရယ်။ အပြင်လူနဲ့လည်း အခုတော့ သိပ်စကားမပြောတော့ပါဘူး ဆရာကြီးရယ်။
ဖြေ ။ မပြောနဲ့ တရား အဟုတ်ထိုင်ပြီဆိုရင် အပြင်လူနဲ့လည်း မပြောနဲ့၊ အပြင်စကားလည်း မပြောနဲ့၊ တရားစကားတောင် လိုရင်တိုရှင်းပြောပြီး အလုပ်သာ လုပ်ပေတော့။ တာဝန်ပေးလိုက်တယ် ထိုင်ပေတော့။
မေး ။ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မေး ။ ဆရာကွီး မင်ျဂလာပါ။
မေး ။ ဆရာကွီး အခု ကြှနျတျော တရားထိုငျတာ တျောတျောကွာကွာ ထိုငျနိုငျလာတယျ ဆရာကွီး။ ကြှနျတော့ကို ကြှနျတျော ကနြေပျနတေယျ။
မေး ။ ဒါနဲ့ ဆရာကွီး ကြှနျတျော တဈခုမေးပါရစေ တရားထိုငျတာ ဘယျလောကျကွာကွာ ထိုငျရမှာလဲ၊ ဘယျနှဈနာရီ ထိုငျရမှာလဲ ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ ဆရာကွီးရယျ တဈနာရီလား၊ နှဈနာရီလား။
ဖွေ ။ အျော တရားထိုငျတာ နာရီနဲ့ မသတျမှတျရဘူး။ ရငျထဲ ရှငျးတာနဲ့ သတျမှတျရတယျ။ ရငျထဲရှငျးရငျ ပွီးတာပဲ။ တဈနာရီ မပွညျ့လညျး ရှငျးရငျထလို့ရတယျ။ တဈနာရီတိတိ ထိုငျပွီး ရငျထဲမှာ ရှုပျယှကျခတျပွီး လေးပငျနရေငျလညျး မကိုကျဘူး ဒီတော့ ရငျထဲရှငျးတာနဲ့ တိုငျးပါ – နာရီနဲ့ မတိုငျးပါနဲ့။ တျောတျောမြားမြား နာရီနဲ့ တိုငျးတာကတော့ အမြားညီညီ ညှတျညှတျနဲ့ ထိုငျဖွဈအောငျ လုပျကွရတာပေါ့။ တကယျ တဈယောကျခငျြး ထိုငျတဲ့အခါကတြော့ ရငျထဲ တဈရှငျးက အရေးကွီးတယျ။
မေး ။ ဟာ ဟုတျပါပွီဆရာကွီး ကြှနျတျောက သိခငျြလို့ပါ။ ကွာကွာထိုငျမှ ကောငျးမယျလို့လညျး နညျးနညျးထငျလို့ပါ။
ဖွေ ။ အခြိနျကွာခွငျး မကွာခွငျးကတော့ အဆုံးအဖွတျ မဟုတျပါဘူး၊ ရငျထဲမှာ ရှငျးဖို့ မရှငျးဖို့ပါပဲ။
မေး ။ ဟုတျပွီ ဆရာကွီး ကြှနျတျောနောကျ ရငျထဲရှငျးအောငျ ထိုငျမယျ။
ဖွေ ။ အေး ရငျထဲကိုရှငျးအောငျထိုငျ – ရှုပျတာ ရှငျးရမယျ၊ လေးတာ ပေါ့ရမယျ၊ ပူတာ အေးရမယျ၊ လှုပျလှုပျရှားရှား ဖွဈနတော ငွိမျရမယျ၊ နလေို့ မကောငျးတာ ကောငျးရမယျ — ဒါတှဟော တရားထိုငျခွငျးရဲ့ အကြိုးအမွတျတှပေဲ။ ဒါကို နညျးနညျးခှဲခွား စိပျဖွာနိုငျရမယျ။ သဘောပေါကျလား မွနျမာလိုပွောတာ သဘောပေါကျလား၊ အင်ျဂလိပျလို ပွောရမှာလား “You must have the ability to differentiate between before and after, Right!”
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး။ မွနျမာလိုပဲပွောပါ ကြှနျတျော မသိတဲ့စကားလုံးတှေ ကြျောသှားမှာ စိုးလို့။ အခုပွောတာတော့ သိပါတယျ။
ဖွေ ။ အေး အဲဒီလိုဆိုရငျ ရငျထဲမှာ ရှငျးအောငျထိုငျ (Clear up your heart…that is the main point, you know.)
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ သဘောပေါကျပါတယျ။ ကြှနျတျော နောကျကို ရငျထဲမှာ ရှငျးအောငျ ထိုငျပါ့မယျ။ ကြှနျတျောလညျး လောကထဲ ဝငျတော့ တဈခါတဈခါကြ ပူတာတှေ လှုပျတာတှလေညျး ရှိတယျ ဆရာကွီးရယျ။ အပွငျလူနဲ့လညျး အခုတော့ သိပျစကားမပွောတော့ပါဘူး ဆရာကွီးရယျ။
ဖွေ ။ မပွောနဲ့ တရား အဟုတျထိုငျပွီဆိုရငျ အပွငျလူနဲ့လညျး မပွောနဲ့၊ အပွငျစကားလညျး မပွောနဲ့၊ တရားစကားတောငျ လိုရငျတိုရှငျးပွောပွီး အလုပျသာ လုပျပတေော့။ တာဝနျပေးလိုကျတယျ ထိုငျပတေော့။
မေး ။ ဟုတျကဲ့ပါ ဆရာကွီး ကြေးဇူးတငျပါတယျ။
This entry was posted in Buddhism and tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts. Bookmark the permalink.